Duulimaadkii ugu horeeyey ee ganacsi oo u dhaxeeya Israel iyo Morocco ayaa galabta gaaray… – Hagaag.com
Duulimaadkii ugu horeeyey ee ganacsi oo u dhaxeeya Israel iyo Morocco ayaa galabta gaaray…
Posted on 22 Diseembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Duulimaadkii ugu horreeyay ee ganacsi ee u dhexeeya Israel iyo Marocco ayaa galabnimada maanta soo gaadhay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Morocco ee Rabat, kaasoo sidda laba wefdi oo ka kala socda America iyo Israel.
Wafdiga Mareykanka waxaa hogaaminaya Jared Kushner, oo ah lataliye sare oo madaxweyne Trump, waxaana wehliya madaxa Golaha Amniga Qaranka Israel, Meir Ben Shabat, iyo la taliyayaal dhowr ah.
“Duulimaadkan waa duulimaadkii ugu horreeyay ee toos ah ee diyaarad ganacsi oo laga leeyahay Israel, waxayna sare u qaadi doontaa taariikhda iyo dhaqanka u dhexeeya Marocco iyo Israel,” ayuu yiri Kushner ka hor inta aysan dhoofin labada wafdi.
Weriyaha Al-Jazeera ee Rabat ayaa soo sheegay in labada wafdi loo qorsheeyay inay tagaan qabriga marxuum King Mohammed V ee magaalada Rabat.
Boqortooyada Marocco ayaa ku dhawaaqday laba toddobaad ka hor dib u soo celinta xiriirka Israel, ka dib markii ay khadka taleefanka kula xiriireen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo u aqoonsaday Galbeedka Saxaraha inay ka mid tahay dalweynaha Morocco.
Wakaaladda Wararka Faransiiska ayaa ku warantay in barnaamijka booqashada uu ka mid yahay la kulanka King Mohammed VI iyo soo bandhigida waxqabadka maamulka Trump ee diblumaasiyadda Bariga Dhexe, toddobaadyo ka hor imaatinka Madaxweynaha la doortay Joe Biden ee Aqalka Cad si uu ugala wareego Trump.